Otu esi etinye Redbot Discord Bot na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye Redbot Discord Bot na Ubuntu 20.04
September 16, 2021 June 11, 2021 by Jọshụa James
Wụnye GIT: CORE PPA
Wụnye ndabere - Python3, PIP, OpenJDK
Mepụta gburugburu mebere
Wụnye Redbot Discord Bot
Nhazi Redbot Discord Bot
Mepụta ngwa Discord Bot
Na-eme atụmatụ ndị anabatara
Nsogbu bụ mmemme ịkparịta ụka n'ịntanetị nwere ọkwa kachasị elu, ọkachasị n'etiti obodo egwuregwu. Ihe na-ewu ewu na ọwa ndị a bụ ntinye nke bots ndị sitere na iwu imeru ihe n'ókè, bots egwu, bots trivia, nhazi ọkwa, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọtụtụ bots na-agba ọsọ na sava, ma ị nwere ike ịkpọ òkù, n'agbanyeghị ọtụtụ n'ime Bots ndị a chọrọ ego ego iji kpọghee atụmatụ ndị ọzọ, nke nwere ike bụrụ ihe na-adịghị agbanwe agbanwe na ihe ize ndụ nchekwa.
Yabụ, usoro na-eto eto n'oge na-adịbeghị anya bụ ịrị elu nke oghere mepere emepe, bots Discord efu na-akwado onwe ya, otu n'ime ụlọ ike zuru oke na mpaghara a ka a na-akpọ. Red Discord Bot. Redbot na-abịa na njirimara niile enwere ike ịgbanye ma ọ bụ nwee nkwarụ, yana nnukwu ibe ngwa mgbakwunye 3rdParty. oru ngo obodo.
Enwere ike itinye bot Discord na sistemụ arụmọrụ dị iche iche. Agbanyeghị, ị ga-amụta ka esi etinye Redbot na sava Ubuntu 20.04 LTS maka nkuzi, nhọrọ a ma ama n'etiti bots Discord.
Ọzọ, ihe achọrọ bụ:
Python 3.8.1 ma ọ bụ karịa; A naghị akwado Python 3.9 ugbu a!
Pip 18.1 ma ọ bụ karịa
Java Runtime Environment 11 (maka nkwado ọdịyo)
Ị ga-achọ ịwụnye GIT: isi PPA, nke ndị mmepe git na-akwado. Ntuziaka anyị maka otu esi etinye PPA omenala nwere ike ịbụ chọtara ebe a.
Iji wụnye Python 3 na Pip3 na ngwugwu ndị ọzọ, Redbot chọrọ ịme iwu ndị a.
Achọrọ ka etinyere Redbot na ebe mebere ya. Ị nweghị ike ịgafe nzọụkwụ a.
Ị nwere ike ịmepụta gburugburu ebe obibi site na iji Python-venv gburugburu ebe obibi, nke bụ ụzọ dị mfe dị ka ndị a.
Mgbe ahụ rụọ ọrụ mebere gburugburu.
Na-esote, ị ga-anọ na mebere gburugburu shei, ị ga-achọpụta na prefix gị ga-enwe (rednv) dị ka nke a bụ aha ị kenyere mgbe ị na-eke gburugburu.
Ugbu a ịnọ na gburugburu mebere gị, ị nwere ike ịwụnye Redbot na ebe mebere ebe ị mebere wee gbaa ọsọ.
Nhọrọ nke mbụ, wụnye na-enweghị nkwado ndabere ndabere config:
Nhọrọ nke abụọ, iji wụnye na nkwado PostgreSQL:
Ugbu a ị tinyela Redbot na ebe mebere gị. Ugbu a, anyị nwere ike ịtọ discord bot na sava gị.
Iji guzobe ihe atụ Discord bot, pịnye iwu a.
Nke a ga-edobe ọnọdụ data, ndabere nchekwa gị, na aha ihe atụ (eji maka ịgba ọsọ bot).
Ozugbo emechara ịtọlite ​​​​atụ, gbaa iwu na-esonụ iji mee Red:
Na-esote, ị ga-ahụ mmepụta na-esonụ. Ngosipụta onwe onye dị mfe dị ka ihe atụ n'okpuru.
Mbụ, ị ga-ahụ ka itinye aha ihe atụ. N'ihe atụ anyị, anyị ji Redbot.
Dabere na nhọrọ wụnye ị họọrọ maka nkwado azụ azụ, họrọ ebe nchekwa azụ azụ.
Ozugbo Redbot dechara ntọala, mmepụta ikpeazụ gị kwesịrị ịbụ nke a.
Ugbu a, ahaziela ihe niile na Redbot na ihe nkesa na-akwado onwe gị; mgbe ị na-agba ọsọ "redbot
Ị ga-achọ ịmepụta ngwa Discord Bot iji tinye akara ngosi akara ngosi. Ị nweta nke a na usoro ndị a n'okpuru.
Jide n'aka na ị mepụtara akaụntụ discord nke ga-abụ onye nwe ya dịka usoro n'okpuru.
Gbaa mbọ hụ na ịbanye na ya Weebụsaịtị Weebụ.
Na-agagharị na peeji nke ngwa
Pịa na bọtịnụ "ngwa ọhụrụ".
Mgbe ịpịchara "ngwa ọhụrụ," nye ngwa Discord ọhụrụ gị aha wee pịa mepụta.
Gaa na taabụ “Bot” n'akụkụ aka ekpe nke ibe Discord onye nrụpụta gị, wee pịa tinye bot.
Ka e were ya na ịchọrọ ka ndị ọzọ nwee ike ịkpọ bot gị ka ha tinye akara Ọha Bot. Idobe ya n'amaghị ama ga-egbochi ndị ọzọ ịjụ bot gị na sava ha, naanị gị ga-enwe ike itinye bot na sava (ọ bụrụhaala na ịchọrọ ikike na ihe nkesa ịchọrọ ịgbakwunye bot na).
Gbaa mbọ hụ Achọrọ Enyemaka koodu OAuth2 edebeghi.
Ugbu a, pịa bọtịnụ detuo ihe ngosi. Ị nwere ike tinye ugbu a na ọdụ Ubuntu gị maka akara ID. Ekekọrịtala akara ngosi a. Ọ bụ okwuntughe ma ekwesịrị ka e jiri nlezianya gwọọ ya, ma ọ bụghị ya, nsogbu nchekwa nwere ike ime.
Discord API chọrọ ebumnuche niile, ma ọ bụ ihe atụ Redbot gị ga-enye gị nsonaazụ njehie a.
Iji mee ka ikike intent dị mkpa achọrọ, gaa na ngalaba Bot na ibe ndị nrụpụta Discord gị.
Pịgharịa gaa na ngalaba "Njirimara Gateway Intent", mee ka ebumnuche abụọ ahụ nwee ihe ùgwù wee chekwaa mgbanwe gị.
Na-esote, megharịa ihe atụ Redbot gị. Ị ga-ahụ ugbu a na njehie apụọla na a na-ahụ nhọrọ ntọala ọhụrụ.
Họrọ prefix maka Redbot gị ka ị gee ntị na ọwa Discord. Ndị ama ama bụ! na @.
Ihe atụ Redbot na-agba ugbu a dị ka ọ dị n'okpuru.
Redbot bụ isi iyi mepere emepe nke mepere emepe nke nwere onwe ya nke ọma mara. Ọ bụrụ na nzuzo metụtara bots discord ọha, ị nwere ike na-arụ ọrụ nke ọma nke a ọbụna maka ndị enyi gị na nhazi VMware ma ọ bụ Docker nwere nnabata onwe gị. Ọbá akwụkwọ ngwa mgbakwunye buru ibu ma kpuchie ọtụtụ ihe bots Discord na-ewu ewu na-ekpuchi. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ nke UI webụ, ị ga-achọ ngalaba na ụfọdụ ịma-usoro azụmaahịa maka ịme ihe atụ Discord bot gị karịa ihe ọjọọ ọ bụla. Ọzọkwa, Redbot nwere nchebe, na-enye gị udo nke uche.
Enwere ike ịchọta plugins obodo maka Redbot nke enyochagoro na ịpị ebe a.
Categories Ubuntu Tags Nsogbu, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye Discord na Ubuntu 20.04